MOE (WikiMyanmar) ရေးသားခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များ (အပိုင်း – ၂) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
MOE (WikiMyanmar) ရေးသားခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များ (အပိုင်း – ၂)	Posted by mm thinker on August 12, 2008
Posted in: MOE, Wikipedia.	Tagged: MOE, Wikipedia.	Leaveacomment
ရေးသားမှုစနစ်အပိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ခွဲခြင်း၊ သတ်ပုံသတ်ညွှန်း၊ စကားလုံးဖလှယ်ခြင်း၊ ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာ ရေးထုံး၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်ထည့်ခြင်း၊ အမျိုးအစားခွဲခြင်းစသည်တို့ကို ဆွေးနွေးပါမည်။
ခေါင်းစဉ်ခွဲပုံခွဲနည်းဟူ၍ သီးသန့်မရှိပါ။ စာရေးသူ၊ ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်သူ၊ အက်ဒမင်စသူတို့၏ လိမ္မာပါးနပ်မှုအရသာ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့အကြောင်းအရာများမှာ အစီအစဉ်တကျမရှိသဖြင့် ခေါင်းစဉ်ခွဲရန် ခက်သည်ကို တွေ့ရပါမည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် တူရာစုပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပြန်ရေးပေးခြင်း (Rewrite) လိုအပ်ပါသည်။ ခေါင်းစဉ်ခွဲရာတွင်လည်း ပုံသေကားကျမရှိပါ။ “ပညာရေး”ဟူ၍လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ “ပညာရှင်ဘဝ”ဟုလည်း ပါကောင်းပါမည်။ “စာပေလောကတွင် ကျင်လည်ခြင်း”ဟု ခွဲသင့်ခွဲရမည်။ “ရရှိခဲ့သော ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးများ”ဟု သီးသန့်ရေးလျှင်လည်း ရေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေးထားနှင့်ပြီးဖြစ်သော အကြောင်းအရာအရ ဖတ်ရှုချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင်၊ အစီအစဉ်ကျအောင် ပြုလုပ်ပေးရန်သာဖြစ်သည်။
လူပေါင်းများစွာကြည့်ရှုကြမည့် စွယ်စုံကျမ်းဖြစ်သဖြင့် သတ်ပုံသတ်ညွှန်းမှာ စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် အညီ အားကိုးယုံကြည်ရဖွယ် ဖြစ်သင့်ပါသည်။ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေထားသော သတ်ပုံ၊ ခွဲထား၊ အဘိဓာန်နှင့် သဒ္ဒါကျမ်းများကို လက်ကိုင်ထားသင့်ပါသည်။ ယခု MOE တွင် ဇော်ဂျီဖောင့်ကို သုံးနေကြသည်ဖြစ်ရာ လက်ကွက်ကိုသေချာစွာ လေ့လာ၍ အပင့်အရစ် အတိုအရှည် တိတိကျကျသုံးသင့်ပါသည်။ (ကျနော်ကိုယ်တိုင် အားနည်းနေသေးကြောင်း ဝန်ခံလိုပါသည်။)
သတ်ပုံသတ်ညွှန်းသည် ဖတ်ရှုသူအတွက်သာမက၊ နည်းပညာပိုင်း တာဝန်ယူသူ အက်ဒမင်များအတွက်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျနော် MOE တွင် ပို့စ်များ စတင်ရေးသောအခါ အက်ဒမင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုစည်သူအောင်က ကျနော်သည် ဇော်ဂျီဖောင့်၌ “ဝလုံး”နှင့် “သုည”ကို မှားယွင်းစွာ သုံးစွဲနေကြောင်း ထောက်ပြပါသည်။ (ဝလုံးသည် Shift+< ဖြစ်ပြီး၊ သုညမှာ ဂဏန်းစဉ်ထဲမှ ၀ ဖြစ်ပါသည်။) မှားယွင်းစွာ သုံးစွဲနေခြင်းသည် ဤ MOE ကို Standard အဖြစ် ကုဒ်ပြောင်းလဲရေး ကြိုးပမ်းနေသူများအဖို့ အခက်အခဲများ ပေါ်ပေါက်စေမည်ဖြစ်သည်။ သတ်ပုံသတ်ညွှန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတိပေးလို သောအခြားအချက်မှာ “ခေါင်းစဉ်” တင်ရာတွင် ဖြစ်သည်။ “သုတေသန သရုပ်ပြအဘိဓာန်ကျမ်း”အကြောင်းအရာ ရေးသားချက်ကိုပင် ထပ်မံ ဥပမာပေးပါမည်။ ဤခေါင်းစဉ်တွင် ပြဿနာမှာ “ရကောက်”ဖြစ်သည်။ ကျနော်သည် ထိုကျမ်းအကြောင်းရေးစဉ်က “သရုပ်”တွင် ရကောက်ကို အရှည်ဖြင့် “ရ”(Shift+7)ဟုသုံးခဲ့သည်။ ယခုပြန်ရှာရာတွင် ရကောက်ခြေတို “ရ”(Ctrl+Alt+7) ဖြင့် ရှာသောအခါ ယင်းအကြောင်းအရာ“မရှိ”ဟု ပြနေပြန်တော့သည်။ ဤသည်ပင် ဇော်ဂျီဖောင့်၏ ပြဿနာ၊ ဇော်ဂျီဖောင့်၏ အားနည်းချက် ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် အကြောင်းအရာတစ်ခုကို စတင်ရေးသား ခေါင်းစဉ်တင်တော့မည်ဆိုလျှင် သတ်ပုံသတ်ညွှန်းနှင့် ကီးဘုတ်လက်ကွက်သည် အလွန်အရေးပါနေသည်ဟု သတိပြုမိလောက်ပေပြီ။ ရေရှည်တွင် အဆက်ပြေရေးအတွက် အလွန်သတိထားထိုက်သောကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ ဇော်ဂျီလက်ကွက်နှင့် မြန်မာစာ၏ ရေးထုံးကို ဟန်သစ်ငြိမ်၏ ရေးသားဆွေးနွေးထားချက် ဤနေရာ တွင်ကြည့်ပါ။
အကြောင်းအရာများကို ရေးသားရာတွင် အခြားဘာသာများ၏ စကားလုံးများကို သုံးစွဲရန် မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စနစ်တကျဖြစ်ရန် သတ်မှတ်ချက်ကလေးရှိလျှင် ကောင်းမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ အင်္ဂလိပ်စကားကို ထည့်သွင်းရမည်ဆိုပါက ယင်းစာလုံးကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ရှိလျှင် မြန်မာ+အင်္ဂလိပ် တွဲ၍ ထည့်သင့်ပါသည်။ ကိုယ့်ဘာသာ တီထွင် ဘာသာပြန်၍ အင်္ဂလိပ်လိုတွဲ၍လည်း ထည့်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ “ရိုဘော့”ဟု ရေးမည့်အစား “စက်ရုပ် (Robot)”ဟု ရေးသင့်ပါသည်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများကိုမှု မြန်မာလို ရှိစေကာမူ အင်္ဂလိပ်လိုပါ တွဲထည့်ပေးခြင်းဖြင့် ရှာဖွေဖတ်ရှုသူအတွက် ကျေးဇူးများစေမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ – ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးရေး (Sustainable Development)။
← CrazY BangkoK	လှုပ်လှုပ်ရှားရှား၊ ဆူဆူညံညံ MOE →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...